Midowga yurub oo Puntland ugu Deeqay lacag dhan 50 milyen oo Yuro+Sawiro – SBC
Midowga yurub oo Puntland ugu Deeqay lacag dhan 50 milyen oo Yuro+Sawiro
Posted by Webmaster on November 4, 2012 Comments
Safirka Midowga Yurub ee Somaliya Michele Cervone iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Garowe xarunta Puntland waxaana ka dib soo dhaweyn ay kulamo laqaatay madaxda dowlada Puntland.
Kulanka oo ahaa mid albaabada u xiran ayaa qaatay mudo saacado ah waxaana markii uu soo dhamaaday saxaafada si wada jir ah ula hadlay madaxweynaha Puntland iyo safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub
Safiirka oo ku horeeyay hadalka ayaa sheegay in midowga Yurub Soomaaliya uu ugu deeqay 158milyan oo Yuro islaamrkaana Puntland ay ka heshay lacagtaasi 50 Milyen oo yuro taasi oo Puntland loogaga taageerayo Dhinacyada Deegaanka, iyo Howrumarinta Waxbarashada.
Madaxweyne Faroole ayaa sheegay in Puntland lacagtaasi ay u adeegsandoonto dhinacyada deegaanka Waxbarashada iyo Amaanka.
Waxaa uu sidoo kale madaxweynuhu ku tilmaamay taageeradan lacageed ay Puntland ka heshay midowga yurub ay noqoneyso tii ugu balaarneyd islamarkaana laga faaiideysan doono.
Lacagtan Puntland loogu deeqay ayaa qeyb ka ah 158da melyan ee uu midowga yurub ugu deeqay Soomaaliya waana mid loogaga faaiideysanayo ka shaqeynta, Arimaha deegaanka, waxbarashada iyo weliba Amaanka.
faroole wuxuu ku mashquulsan yahay dhismaha garoowe